Sunday October 29, 2017 - 07:51:19 in Wararka
Dhismaha Hotelka ayaa shalay galab ilaa xalay waxaa ka socday iska hor imaad iyo qaraxyo, waxaana xalay qeybo kamid ah Muqdisho laga seexan waayay dhawaqa rasaasta iyo qaraxyada ka dhacayay Hotelka Naasa Hablood 2.
Ciidamada Gaashaan ayaa saakay aroor hore soo afjaray weerarkii ka socday gudaha Hotelka, waxa ayna ciidamada dileen qaar kamid ah dableydii hubeesneyd ee Hotelka weerarka ku qaaday oon tiradooda wali la heyn halka kuwa kalana lasoo sheegayo in nolol lagu qabtay.
Saraakiil katirsan Laamaha amaanka dowlada Soomaaliya ayaa laga soo xigtay in nolosha lagu qabtay sadex kamid ah dableydii hubeesneyd ee weerarka ku qaaday Hotelka Naasaha Hablood 2.
Xaalada ayaa hada degan, waxaana dhismaha Hotelka laga soo saaray dad lagu dhax dilay dhismahaasi iyo sidoo kale dad kale oo ku dhaawacmay qaraxyadii iyo rasaastii ka socotay gudaha Hotelka.
Khasaaraha dhimasho iyo midka dhaawac ee ka dhashay weerarka lagu qaaday Hotelka Naasa Hablood 2 ayaa sii kordhaya. dadka ku dhintay weerarkaasi ayaana la sheegayaa in ay gaarayaan 30-qof.
Dowlada Soomaaliya ayaa la filayaa in faah faahin dheeraad ah ka bixiso weerarkan khasaaraha badan dhaliyay ee lagu qaaday Hotelka Naasa Hablood 2 ee kuyaala Degmada Xamar Weyne.
Al Shabaab ayaa sheegatay masuuliyada weerarkan xoogan ee Hotelka lagu qaaday , waxa ayna Tilmaameen Shabaab in Weerarka Hotelka uu lahaa Wasiirka Amniga Gudaha ku dileen masuuliyiin iyo saraakiil dowlada katirsan.